Isicelo esisemthethweni seVisa yaseIndiya-Faka isicelo se-eVisa yaseIndiya
eIndiya kunye neVisa
Ngaphezulu kwee-visa ezingama-99.5% ezivunyiweyo zingaphantsi kosuku olunye
Isicelo se-Visa yaseIndiya
Yintoni i-eVisa yaseIndiya (okanye iVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi)
Urhulumente waseIndiya Iphehlelele ugunyaziso lokuhamba nge-elektroniki okanye i-eTA yaseIndiya evumela ukuba abemi bamazwe ayi-180 bahambe baye eIndiya ngaphandle kokufuna isitampu somzimba kwipasipoti. Olu hlobo lugunyazisiweyo lubizwa ngokuba yi-eVisa India (okanye i-India India Visa).
Ye-elektroniki le India Visa ekwi-Intanethi evumela iindwendwe zangaphandle zityelele eIndiya ngeenjongo ezintlanu eziphambili, ukhenketho / ulonwabo / izifundo zexesha elincinci, ishishini, utyelelo lwezonyango okanye iinkomfa. Kukho elinye inani lamaqhezu aphantsi kodidi ngalunye lwevisa.
Bonke abahambi bamazwe angaphandle bayacelwa ukuba babambe i-eVisa yaseIndiya (inkqubo yesicelo se-Visa yase-India) okanye iVisa eliqhelekileyo / iphepha ngaphambi kokungena elizweni njengoko Amagunya oRhulumente woFuduko lwaseIndiya.
Qaphela ukuba abahambi abaya eIndiya kwezi Amazwe angama-180, afanelekileyo ukufaka isicelo iVisa yaseIndiya kwi-Intanethi ayinyanzelekanga ukuba ityelele uMzi wommeli waseIndiya okanye iKhomishini ePhakamileyo yaseIndiya ngenjongo yokufumana iVisa eya eIndiya. Ukuba ungowesizwe esifanelekileyo, emva koko unokufaka isicelo India Visa ekwi-Intanethi. Nje ukuba i-visa eya e-India ikhutshwe kwifomathi yekhompyuter, ungaphatha ikopi ye-elektroniki kwifowuni yakho okanye ikopi eprintiweyo ye-eVisa India (i-elektroniki ye-India Visa). Igosa lezokungena kumda liya kujonga ukuba i-eVisa India iyasebenza na kwinkqubo yepaspoti kunye nomntu.
Indlela yase-Indiya yeVisa yokuthenga okanye ye-eVisa yaseIndiya yindlela ekhethiweyo, ekhuselekileyo nethembakeleyo yokungena eIndiya. Iphepha okanye iIndiya eVisa eqhelekileyo ayithathwa njengeyona ndlela inokuthenjwa nguRhulumente wase-India. Njengokongezwa, izibonelelo kubahambi, akudingeki ukuba bandwendwele I-Indian Embassy / i-Consadors okanye iKhomishini ePhezulu ukukhusela i-India Visa njengoko le visa inokuthengwa kwi-intanethi.
Iindidi zeIndiya eVisa
Zintlanu iindidi eziphezulu zodidi lweIndiya eVisa (inkqubo yokufaka isicelo eIndiya)
Ngenxa yezizathu zokhenketho, iVisa abakhenkethi
Ngezizathu zeshishini, iVisa eShishini
Ngezizathu zonyango, i-Visa ye-e-Medical
Ngenxa yezizathu zokhathalelo lonyango, i-e-MedicalAttendant Visa
Ngenxa yezizathu zenkomfa, i-e-Conference Visa
Iivisa zabakhenkethi zinokufumaneka ngeenjongo zokhenketho, ukuBona ngamehlo, ukuNdwendwela abahlobo, ukutyelela izihlobo, inkqubo yexesha elifutshane leYoga, kwanakwinyanga enye yomsebenzi ongafunwayo wokuzithandela. Ukuba ufaka isicelo se IVisa yaseIndiya kwi-Intanethi, uvumelekile ukuyifumana ngezizathu ezichaziweyo.
IVisa yeshishini eIndiya inokufumaneka ngabafakizicelo kwintengiso / ukuthengwa okanye urhwebo, ukuya kwiintlanganiso zobuchwephesha / zeshishini, ukuseta ishishini / ishishini, ukwenza ukhenketho, ukuhambisa izifundo, ukufumana amandla, ukuthatha inxaxheba kwimiboniso okanye ishishini / imibukiso yorhwebo, ukwenza njengengcali / ingcali ngokunxulumene neprojekthi eqhubekayo. Ukuba uza ngeenjongo ezichaziweyo, uya kufaneleka Inkqubo yokufaka isicelo kwi-Indiya.
Yintoni efunekayo ukufumana i-India Visa kwi-intanethi okanye e-India eVisa
Ukuba uzibophelele kwinkqubo yesicelo se-Visa yaseIndiya ngqo indlela eku-intanethi kule webhusayithi, kuya kufuneka ke ukuba ulandele le nkqubo ilandelayo:
Iinkcukacha zakho zencwadana yokundwendwela
Iinkcukacha zakho zedilesi
Intlawulo ngeDebbit / ikhadi letyala okanye lePayPal
Ukuba nesimilo esihle kwaye ungabinayo imbali yolwaphulo-mthetho
India i-eVisa iingongoma eziphambili
Ungahlala kangangeentsuku ezingama-180 kwiVisa yabakhenkethi yonyaka omnye.
I-e-Visa yase-India efunyenwe kwinkqubo ye-Indian Visa kwi-Intanethi inokusetyenziswa ngamaxesha amaninzi kwikhalenda yonyaka umzekelo phakathi kukaJanuwari ukuya kuDisemba
Ixesha lokuphelelwa lixesha kwi-30 yoKhenketho lwabakhenkethi i-Visa yase-India ayisebenzi ekuqinisekiseni kokuhlala e-India, kodwa ukuya kumhla wokugqibela wokungena e-India.
Abagqatswa bezizwe ezifanelekileyo kufuneka ufake isicelo kwi-intanethi ubuncinci kwiintsuku ezi-4 ngaphambi komhla wokungena.
I-Indiya ye-eVisa okanye i-India Visa ekwi-Intanethi ekwi-intanethi ayiguquki, ayinakudluliselwa kwaye ayinakushenxiswa.
I-Visa yase-Indiya ekwi-Intanethi okanye kwi-eVisa yase-Indiya ayisebenzi mthethweni kwimimandla ekhuselweyo / ethintelweyo okanye emiselweyo.
The incwadana yokundwendwela kufuneka isebenze iinyanga ezintandathu ukusukela kumhla wokufika eIndiya.
Abahambi ngeHlabathi liphela kufuneka babe nokufumana itikiti lokubuyela okanye ukuya kwitikiti lokuhamba, benemali eyaneleyo yokuchitha ixesha lokuhlala kwakhe eIndiya.
Abandwendweli bayacelwa ukuba bahambise ikopi egunyazisiweyo ye-Visa yaseIndiya isigunyaziso rhoqo ngexesha lokuhlala kwabo eIndiya.
Bonke abaviwa kufuneka babenophawu oluchongiweyo, nokuba ungaphantsi kweminyaka mingakanani na.
Abagcini abafaka isicelo seVisa yaseIndiya kwisicelo esikwi-intanethi kufuneka babakhuphele ngaphandle abantwana babo (ren) kwisicelo sabo. I-Visa yaseIndiya iyafuneka kumntu ngamnye ngokwahlukeneyo, akukho luvo lweqela leVisa eya eIndiya okanye iVisa yosapho yeIndiya.
Ipasipoti yomfaki-sicelo kufuneka abe nawo nakowuphi na umcimbi amaphepha ama-2 acacileyo okufuduka kunye nokufuduka kunye neengcali zemida yokufaka isitampu sokungena / ukuphuma ukuya e-India. Awubuzwa ngokungqalileyo lo mbuzo xa ufaka isicelo se-India Visa kwi-intanethi kodwa kuya kufuneka ukhumbule ukuba ipasipoti yakho kufuneka ibe namaphepha amabini angenanto.
Abagqatswa abaphethe amaZiko oHambo aMazwe ngaMazwe okanye iiPasipoti zoDalo, abanakho ukwenza isicelo kwi-eVisa India. Inkqubo yokufaka isicelo eIndiya i-Visa kwi-Intanethi yenzelwe kuphela umnini wepasela oqhelekileyo. Umnini amaxwebhu okuhamba ababaleki nawo akafanelekanga ukufaka isicelo kwi-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi. Abasebenzisi abakweli nqanaba kufuneka benze isicelo se-Visa yaseIndiya kwindlu yozakuzo okanye kwiKhomishini ePhakamileyo yaseIndiya. Urhulumente wase-India akavumeli loo maxwebhu okuhamba ukuba afaneleke ukuba afumane i-Visa ekhompyuter ngokomgaqo-nkqubo wakhe.
Inkqubo ye-Visa yase-India
Inkqubo yesicelo se-Visa yase-India ye-eVisa India i-intanethi ngokupheleleyo. Akukho mfuneko yokundwendwela i-Indian Embassy okanye i-Indian High Commission okanye nayiphi na iofisi kaRhulumente wase-India. Yonke inkqubo inokugqitywa kule webhusayithi.
Qaphela ukuba ngaphambi kokuba kukhutshwe i-eVisa India okanye i-elektroniki yeVisa yase-Indiya ekhompyuter, unokubuza eminye imibuzo enxulumene nolwalamano lwakho nosapho, abazali kunye negama lomlingane kwaye ucelwe ukuba ulayishe ikopi yephepha lokuhlola ipasipoti. Ukuba awukwazi ukufaka ezi okanye uphendule nayiphi na imibuzo emva koko, unokunxibelelana nathi ngenkxaso nangoncedo. Ukuba undwendwela iinjongo zeshishini, unokucelwa ukuba ubonelele ngesalathiso sombutho waseIndiya okanye inkampani etyelelwayo.
Inkqubo yesicelo se-Visa yaseIndiya ngokomyinge ithatha imizuzu embalwa ukuyigqiba, ukuba ubambekile nangaliphi na ixesha ufune uncedo kwiqela lethu lenkxaso kwaye uqhagamshelane nathi kule webhusayithi usebenzisa ifomu yoqhakamshelwano.
Izinto ezifunekayo kunye nesiKhokelo sokugcwalisa iFomu yeSicelo seVisa yaseIndiya
Ifomu yesicelo se-visa e-India ifuna iimpendulo kwimibuzo yobuqu, iinkcukacha zencwadana yokundwendwela kunye neenkcukacha zomlinganiswa. Nje ukuba intlawulo yenziwe, kuxhomekeka kuhlobo lwe-visa efakelwe isicelo, ikhonkco lithunyelwa nge-imeyile elifuna ukuba ulayishe ikopi yephepha lokuhlola. Ikopi yokuhlolwa kwepasipoti inokuthathwa kwifowuni yakho ephathekayo kwaye kungabi njalo kwisikena. Ifoto yobuso nayo iyafuneka.
Ukuba undwendwela ngeenjongo zeshishini, ke kuya kufunwa ikhadi lokundwendwela okanye ikhadi lebhizinisi kwiVisa yoShishino lwaseIndiya. Kwimeko ye-Visa yase-India yoNyango, uya kucelwa ukuba unikezele ikopi okanye umfanekiso weleta ovela kwesi sibhedlele okanye iklinikhi apho unyango lwakho licwangcisiweyo.
Awudingi ukufaka amaxwebhu ngokukhawuleza, kodwa kuphela emva kovavanyo lwesicelo sakho. Uyacelwa ukuba uhambelane neemfuno zefom yokwenza isicelo. Ukuba unayo nayiphi na ingxaki yokulayisha, uya kuthi ukwazi ukuthumela imeyile idesika yethu yoncedo.
Kucelwa ukuba ufunde isikhokelo esibonelelweyo imfuno yobuso befoto kwaye Imfuneko yokufumana ikopi yencwadana yokundwendwela yeVisa. Isikhokelo esigqibeleleyo sesicelo sonke siyatholakala kwi Iimfuno zeVisa epheleleyo.
Izikhululo zeenqwelo moya apho India Visa (eVisa India) isebenziseka khona
I-eVisa India (India Visa yase-elektroniki, enamalungelo afanayo ne-Indian Visa) isebenza kuphela kwezi nqwelo moya kunye neziphango zokungena kwiIndiya. Ngamanye amagama, ayizizo zonke iinqwelomoya kunye nezikhululo zaselwandle ezivumela ukungena eIndiya kwi-eVisa India. Njengomkhweli we-onus ikuwe ukuze uqiniseke ukuba uhambo lwakho lukuvumela ukusetyenziswa kwale Visa ye-elektroniki yaseIndiya. Ukuba ungena eIndiya wenza umda womhlaba, umzekelo, ke le Visa yase-India Visa (eVisa India) ayilulungelanga uhambo lwakho.
Izikhululo zeenqwelomoya ezilandelayo zivumela abakhweli ukuba bangene eIndiya kwi-elektroniki India Visa (eVisa India):
Ukulungiselela abakhweli beenqanawa zokuhamba ngeenqanawa, URhulumente wase-India ukwanikeze nelungelo lokuba nezi zikhundla zi-5 ezinkulu zamazibuko ase-Indiya ukuze babe nokufanelekela ukubamba i-India Visa (eVisa India) ye-elektroniki.
Ukushiya i-India kwi-eVisa
Amazwe afanelekileyo eVisa
Abemi bamazwe adweliswe ngezantsi bayayifanelekela i-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi.
Amaxwebhu ayimfuneko kubafakizicelo e-eVisa India
Uyacelwa ukuba ulayishe kuphela umfanekiso wakho wobuso kunye nomfanekiso wepasipoti ye-bio ukuba undwendwela iinjongo zokuzonwabisa / ukhenketho / ikhosi yexesha elifutshane. Ukuba undwendwela ishishini, intlanganiso yezobuchwephesha ke kuya kufuneka ulayishe isayinwe yakho ye-imeyile okanye ikhadi lebhizinisi ukongeza kumaxwebhu amabini angaphambili. Abafakizicelo kwezonyango kufuneka banikezele ngeleta evela esibhedlela.
Unokuthatha ifowuni kwifowuni yakho kwaye ulayishe amaxwebhu. Ikhonkco lokufaka amaxwebhu linikezelwa kuwe nge-imeyile evela kwinkqubo yethu ethunyelwe kwi-imeyile ebhalisiweyo ye-imeyile emva kokuba intlawulo yenziwe ngempumelelo. Unokufunda ngakumbi malunga ne amaxwebhu afunwa apha.
Ukuba awukwazi ukufaka amaxwebhu ahambelana ne-eVisa yakho yeIndiya (yeIndiya yeVidiyo ye-elektroniki) ngaso nasiphi na isizathu, ungasithumela nathi nge-imeyile.
Unokwenza intlawulo nakweyiphi na indlela yeemali ezili-132 kunye neendlela zokuhlawula kubandakanya iDebit / iTyala / Jonga / iindlela zokuhlawula. Qaphela ukuba irisithi ithunyelwa kwi-id eyanikwa ngexesha usenza intlawulo. Intlawulo ihlawuliswa nge-USD kwaye iguqulwe ibe yimali yasekhaya kwisicelo sakho se-Visa yase-India (eVisa India).
Ukuba awukwazi ukwenza ntlawulo ye-eVisa yaseIndiya (ye-Visa yase-Indiya ye-elektroniki) esona sizathu sokuba lo ngxaki ikukuba, le ntengiselwano yamanye amazwe ivalwa yibhanki yakho / ikhredithi / ikhadi lebhanki lebhanki. Nceda ubize inombolo yomnxeba ngasemva kwikhadi lakho, kwaye uzame enye inzame ukwenza intlawulo, oku kusombulula umbandela kuninzi lwamatyala.
Ngaba i-India eVisa isitampu kwipasi?
Igosa lokufudukela kwelinye ilizwe liya kufuna kuphela iprinta yakho ye-PDF / imeyile eprintiweyo kwaye uqinisekise ukuba i-eVisa yaseIndiya ikhutshelwe ipaspoti enye.
I-eVisa yase-India ayisositampu kwipasipoti efana ne-India Visa eqhelekileyo kodwa ikopi ikhutshiwe ekhutshelwe umfakisicelo nge-imeyile.
NgeyeNkanga ka-2014, urhulumente waseIndiya waqala i-India eVisa / iGunyaziso lokuHamba nge-elektroniki (i-ETA) kwaye waqhuba umsebenzi kubahlali bezizwe ezingaphezulu kwe-164, kuquka nabantu abanelungelo lokufumana i-visa yokufika. Ukongezwa kwemvula kwandiswe kumazwe ayi-113 ngo-Agasti ka-2015 i-ETA ikhutshelwa imveliso yokundwendwela, ukutyelelwa ngabathandekayo, unyango olufutshane lokubuyisela kunyango kunye nokutyelela amashishini. Esi sicwangciso sathiywa igama lokuba yi-Visa abakhenkethi (i-VV) nge-15 ka-Epreli ngo-Epreli ngo-2015.
Isicelo se-e-Visa kufuneka senziwe kuwo nawuphi na umcimbi weentsuku ezine zeshedyuli ngaphambi komhla wokufika. Undwendwelo eVisa lufumaneka kangangeentsuku ezingama-30, unyaka omnye kunye neminyaka emi-1. Iintsuku ezingama-5 i-eVisa ivunyelwe iintsuku ezingama-30 kunye nokungena kabini. Ukuqhubeka ngokuqhubekayo kwi-30 Year kunye neMinyaka eyi-1 Undwendweli / iVisa abakhenkethi ivunyelwe iintsuku ezingama-5 kunye nokungenela okuninzi. I-Business eVisa isebenza unyaka omnye kwaye ivumelekile ukungena kwamangenelo amaninzi.
URhulumente waseIndiya ayifuni ukutyelelwa ngokwasemzimbeni kwiNdlu yoZakuzo yaseIndiya okanye kwiNdlu yoZakuzo yaseIndiya kwiMicimbi yaseIndiya eVisa. Le webhusayithi ivumela abasebenzisi ukuba babonelele ngolwazi olufunekayo ukuze bakhuphe iVisa ye-elektroniki eya eIndiya (eVisa yaseIndiya). Kule Webhusayithi, umsebenzisi kufuneka akhethe injongo yohambo lwabo kunye nobude bexesha leVisa yabakhenkethi. Ixesha lesithathu leVisa yaseIndiya zinokwenzeka ngeenjongo zoKhenketho njengoko kuvunyelwe Urhulumente waseIndiya usebenzisa indlela yewebhusayithi, uSuku lwe-30, unyaka o-1 kunye neminyaka emi-5.
Abahambi kwezamashishini mabaqaphele ukuba banikwa iVisa yonyaka eBusiness Visa eya eIndiya (India eVisa) nokuba bafuna ukungena kwiintsuku ezimbalwa kwintlanganiso yeshishini. Oku kuvumela abasebenzisi beshishini ukuba bangafuni enye i-eVisa yaseIndiya kulo naluphi na utyelelo olulandelayo kwiinyanga ezili-1 ezizayo. Phambi kokuba kukhutshwe iVisa yaseIndiya kubahambi ngeShishini, baya kucelwa iinkcukacha zenkampani, umbutho, iziko abalindwendwelayo eIndiya kunye nombutho / inkampani / iziko labo kwilizwe labo. Ishishini le-elektroniki i-India Visa (i-India eVisa okanye i-eBusiness Visa India) ayinakusetyenziselwa iinjongo zokuzonwabisa. Inkqubo ye- Urhulumente waseIndiya yahlula imeko yolonwabo / yokubona indawo yabakhenkethi kuhambo lweshishini lotyelelo eIndiya. I-Visa yaseIndiya ekhutshelwe ishishini yahlukile kuneVisa yabakhenkethi ekhutshwe kwi-intanethi ngendlela yewebhusayithi.
Umhambi ungabamba i-India Visa yoKhenketho kunye ne-India Visa yeShishini kwangaxeshanye kuba zisetyenziselwa iinjongo ezizodwa. Nangona kunjalo, inye kuphela i-Visa yaseIndiya enye yeShishini kunye ne-Indiya enye yeVisa yoKhenketho evunyelwe ngexesha kwipaspoti enye. IiVisa ezininzi zabakhenkethi zaseIndiya okanye iVisa ezininzi zeShishini laseIndiya azivunyelwe kwipaspoti enye.
Indlela yewebhusayithi yokugcwalisa i-India Visa ye-elektroniki (eVisa India) ithathwa njengethembeke ngakumbi, inokuthenjwa, ikhuselekile kwaye ikhawulezisiwe kwaye ithathwa njengekhuselekileyo kubasebenzisi Urhulumente waseIndiya.
Nangona kunjalo, inani leendidi ezivunyelwe nguRhulumente wase-India Visa kwindlela yewebhusayithi / ye-elektroniki yeIndiya iVisa ngeenjongo ezinqamlekileyo kubandakanya oku kulandelayo.
I-Visa yabakhenkethi eya eIndiya
Ukudibana nabahlobo kunye nezihlobo
Inkqubo emfutshane yeYoga
Izifundo zexesha elifutshane kulwimi lwasekhaya, umculo, umdaniso, ubugcisa kunye nomsebenzi wezandla, ukupheka, amayeza ixesha elingaphantsi kweenyanga ezi-6
Umsebenzi wokuzithandela ofikelela kwinyanga enye engaboneleli ngembuyekezo yemali
Ishishini leVisa yaseIndiya
Ukuseta ishishini leShishini / leShishini
Ukuthengisa / ukuThenga / ukurhweba
Ukuzimasa iintlanganiso zezobugcisa / zeshishini
Ukuthatha inxaxheba kwimiboniso, kwiNkomfa yeShishini
Ukuthatha inxaxheba kwiirhafu zorhwebo
Ukwenza njengoGwebi / iNgcali ngokunxulumene neprojekthi eqhubekayo
Ukuhambisa intetho / s
QAPHELA: I-Visa yeShishini ivumela ukuya kwiindidi ezahlukeneyo zeeshishini zeshishini, ukuhlangana ngokudibanisa amashishini, iisimpuli zeshishini, iisemina zokuthengisa kunye neenkomfa zeshishini. Inkomfa i-Visa ayimfuneko ngaphandle kokuba urhulumente wase-India uququzelele umsitho.
Visa yezoNyango eNdiya
I-Visa ye-Medical Attendant ye-Indiya
Ngomongikazi wesigulana, ukhathalelo lokuthatha abasebenzi. I-Visa ye-Medical Attendant ye-India ayisiyiVisa ezimeleyo Iinkcukacha eziphambili zesigulana ziyafuneka ukuze kukhutshwe i-visa yaBafundi.
Urhulumente wase-India unike indlela elula yokusebenzisa i-India Visa ngekhompyutha (i-India eVisa) kumacandelo amathathu aphambili abahambi abasebenzisa indlela yewebhusayithi ekwi-intanethi, abahambi beshishini, abakhenkethi kunye nabahambi bezonyango ngokulula kwi-intanethi. ifomu yokufaka isicelo.
Izibonelelo zokufaka isicelo kwi-Intanethi
KUFUNEKA IINYE ZEENKCUKACHA EZIBALULEKILEYO ZOKUGQIBELA I-E-VISA YAKHO ye-EIA
24/365 Ukusetyenziswa kwesicelo kwi-Intanethi.
Akukho xesha libekiweyo.
Uhlaziyo lwesicelo kunye nokulungiswa kweengcali ze-visa ngaphambi kokungeniswa kwi-Ofisi yezeKhaya kwi-Indiya.
Inkqubo yesicelo esenziwe lula.
Ukulungiswa kwengcaciso elahlekileyo okanye engachanekanga.
Ukukhuselwa ngasese kunye nefomu ekhuselekileyo.
Ukuqinisekiswa kunye nokuqinisekiswa kolwazi olongezelelweyo olufunekayo.
Inkxaso kunye noNcedo 24/7 nge-imeyile.
I-Visa yakho ye-Elektroniki evunyiweyo yathunyelwa nge-imeyile ngefomathi yePDF.
Ukufunyanwa kwe-imeyile nge-eVisa yakho kwimeko yelahleko.
Ukubuyiselwa kwenkonzo ukuba i-eVisa yakho iyaliwe.
Akukho zindleko zentengiselwano zongezelelweyo zeBhanki ze-2.5%.